Valencia oo ka tagaya Man United iyo kooxda oo Calaameysatay Kabtankeeda Cusub – Gool FM
Valencia oo ka tagaya Man United iyo kooxda oo Calaameysatay Kabtankeeda Cusub
Haaruun March 2, 2019
(Manchester) 02 Maarso 2019. Xidigga xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa la filayaa in dhowaan loo magacaabo kabtanka naadiga.
Manchester United ayaa diidday in ay heshiis sanad ah u kordhiso qandaraaska daafaca reer Ecuador ee haatan dhaawaca ku maqan Antonio Valencia, iyadoo lagu wado in uu xilli ciyaareedkan ka tago naadiga sida saxaafadda Ingiriisku faafisay.
P Pogba ayaa haddii uu baxo Valencia oo 33 jir ah waxaa tababaraha Man United, Ole Gunnar Solskjaer uu u magacaabi doonaa kabtanka cusub ee naadiga, halka macallinkii isaga ka horreeyay ee Jose Mourinho uu xilka kabtan ku xigeenka xitaa ka qaaday Pogba.
Maqnaanshaha Valencia ayaa waxaa ishaarada Kabtannimada MU caadiyan xiranayay Ashley Young oo isna dhowaan heshiis cusub oo sanad ah u saxiixay kooxda, hase yeeshee Solskjaer ayaa u arka in Pogba uu yahay mid leh astaamaha hoggaamineed.
Intii ay socdeen ciyaarihii adduunka 2018 ayaa waxaa la arkayay muuqaal video ah Pogba oo doorka kabtannimo ciyaaraya isagoo aan ahayn kabtanka rasmiga ah ee xulka Faransiiska.
Jamaahiirta Real Madrid oo cedeyn ay dhiibteen ku go’aamiyay shaxda ay doonayaan in uu ku soo galo Solari kulanka caawa ee El Clasico
Real Madrid oo xilka ka tuurtay macallinkii kooxda da'yarta isla markaana magacawday Raul Gonzalez